तिहार लगत्तै कोरियाले नेपालबाट कामदार लैजादै, नयाँ भाषा परिक्षा कहिले..? - jagritikhabar.com
तिहार लगत्तै कोरियाले नेपालबाट कामदार लैजादै, नयाँ भाषा परिक्षा कहिले..?
को’रो’नाका कारण दक्षिण कोरियाले बिदेशी कामदारहरुको आगमनमा गरिरहेको क’डा’ई यो महिनाको अ’न्तिमतिरबाट खु’कुलो पार्ने भएको छ।
कोरियामा ७० प्रतिशतभन्दा बढि जनसंख्याले खो’प लगाइसकेपछि अब जनजीवन सामान्य अव’स्थामा लैजाने प्रकृया अनुरुप कोरियाका विभिन्न कम्पनीहरुमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारहरुलाई पनि सहज रुपमा प्र श दिने नि र्णय भएको यहाँको श्र’म म’न्त्रालयले शुक्रबार जानकारी दिएको छ।
दक्षिण कोरियाले इपिएस प्रकृया अन्तरगत १६ वटा देशहरुबाट विदेशी का’मदार भित्र्याउँदै आइरहेको थियो। इपिएस अन्तरगत मंगोलिया, भियतनाम, थाईल्याण्ड, चीन, नेपाल लगायतका देशबाट कोरियामा काम गर्न कामदार जाने गर्दछन। सउलको सरकारी कम्प्ले क्समा भएको पत्रकार सम्मे लनमा श्र’म मन्त्रालयले अब यि १६ वटै देशबाट सहजै का’मदार भित्र्याईने कुरा जानकारी दिएको छ।
तर म्यानमार, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, उजवेकिस्तान र किर्जिकिस्तानका इपिएस का’मदारहरुलाई भने खो’प लगाएको २ हप्तापछि मात्र भिजा दिइने छ।
यि देशहरुमा अहिले पनि को’रो’नाको अ’वस्था राम्रो नभएका कारण यस्तो गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी यि देशहरुका इपिएस कामदारहरु कोरिया प्रवेश गर्नु ७२ घण्टा अघिको पि’सिआ’र प’रिक्ष’णमा ने’गेटि’भ रि’पो’र्ट आउनुपर्नेहुन्छ।
म्यानमार, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, उजवेकिस्तान र किर्जिकिस्तान बाहेका अन्य ११ वटा देशहरुका हकमा भने यदि कामदारले प’रिक्ष’ण रि’पो’र्ट ने’गेटि’भ भएको प्रमा’ण पेश गरेमा मात्रै पनि कोरिया प्रवेशको अनु’मति प्रदान गरिनेछ।
उनिहरुले खो’प नलगाएको खण्डमा पनि कोरिया प्र’वेश पाउनेछन तर कोरिया पुगेपछि भने तु’रुन्तै खो’प लगाईनेछ।
सबै देशका इपिएस का’मदारहरु कोरिया पुगेपछि अ’नि’वार्य रुपमा १० दिन सरकारले व्यवस्था गरेको क्वा’रेन्टि’नमा बस्नुपर्दछ। अहिले दक्षिण कोरियाले म्यानमार सहित को’रो’नाको स्थिति राम्रो नभए’का अन्य ४ देशहरुबाट का’मदार लगेको छैन भने अन्य ११ वटा देशहरुबाट भने सिमि’त मात्रामा का’मदार भित्राइरहेको छ।
अहिले पि’सि’आ’र प’रिक्ष’ण ने’गे’टिभ भएका कामदार कोरिया जान पाइरहेका छन तर उनिहरु कोरिया पुगेपछि भने अ’निवार्य २ हप्ताको क्वा’रेन्टि’न बस्नुपरिरहेको छ।